Ubomi be-gay eGrisi: iGrisi kunye nokhenketho olunobufanasini | Ukuhamba kwe-Absolut
Ubomi be-gay eGrisi: iGrisi kunye nokhenketho olunobungqingili
maruuzen | | Ihlaziywe 11/02/2021 12:38 | EGrisi
IGrisi kunye nobomi be-gay budibene kwinkcubeko nakwimbali ixesha elide. Isihloko sinomdla kakhulu kwaye sinokuphikisana, kunye neembono ezininzi kunye nokufundwa okunokwenzeka, kodwa ngaphaya koko namhlanje IGrisi yindawo entle yezokhenketho.
IGrisi ibisoloko ikho ikwindawo Kuluhlu lweendawo zokuthandana kwabantu besini esinye emhlabeni, kokubini kwimbali yayo kwaye kuba kangangexesha elithile ezinye zeziqithi zayo ziye zaba zii-meccas zokhenketho olunobufanasini kunye nobomi. Namhlanje emva koko Ubufanasini eGrisi.
IGrisi kunye nokhenketho olunobufanasini
Ukuba singamafanasini kwaye sifuna ukonwabela iholide elungileyo, phumani niye kwiindawo zentselo, ilanga, hambani nohambo kwaye nidibane nabantu, Singaya phi, yintoni esinokuyenza kwaye phi? Kumthetho, Ubufanasini abuphelelanga kwiziqithi, njengoko unokucinga ukuba ludumo ezinye iziqithi zamaGrike ezinazo kuluntu olungamanye amazwe kwezesini. Kuninzi okunokwenziwa IAthene.
Indawo ye-gay kwikomkhulu laseGrisi ayibonisi okanye icace njengakwezinye iidolophu zaseYurophu, kodwa sisixeko esinenkululeko kwaye ngokuqinisekileyo sigxile kuluntu lwesini. Imivalo ye-gay igxile kwindawo yaseGazi, kodwa azicacanga. Nazi ezinye zezona zidumileyo zezi IBAR enkulu, yenye yeebar zokuqala zesini eAthene, ISodade2, enemigangatho emibini yokudanisa kunye nemivalo emininzi, kwaye Shamone, ngemiboniso ye-queen queen kunye nobusuku bemixholo, umzekelo.
E-Athene kuyinto eqhelekileyo ukuya UQhuder, a ikatala ithandwa kakhulu luluntu lwesini sabantu basekuhlaleni kunye nabaphumayo. KukwiPlateia Irinis kwaye kuyacetyiswa ukuba usele iibhiya ezimbalwa okanye utye. Amen ukuba abantu badibana apha, ayinamsebenzi nokuba ulifanasini okanye uthe tye, wonke umntu wamkelekile.
Ukuba uhamba njengesibini eAthene zininzi iindawo zokuhlala ezinobungqingili okanye ngokuthe ngqo isitabane. Umzekelo, Ihotele iChic, kufutshane neGazi ngokuchanekileyo, kunye nebar kunye nerestyu kwindawo leyo; Ihotele ekuMbindi weAthene, ePlaka, idolophu yakudala; okanye I-Electra Palace yaseAthene, nakwiziko lembali, kunye nethala, i-spa kunye nokuzivocavoca.
Ewe kunjalo, kufuneka kukhunjulwe ukuba apha umtshato olinganayo awusebenzi, iimanyano zaseburhulumenteni phakathi kwabantu besini esifanayo, kwaye nangona umba ujikeleza eluntwini ayisiyonto ixoxwa ngokuphandle. Nantsi inguquko ukuze ube nomonde ngakumbi. Ayisiyo into yokuba kukho ucalucalulo oluvulekileyo kodwa hayi oluchaseneyo, inkqubo, sonke siyayazi, inde kwaye ngamanye amaxesha iyacotha, kodwa iyaqhubeka. Ngethamsanqa.
Ngoku i Iziqithi zamaGrike ziindawo ezithandwayo zeholide. Masikhumbule ukuba kukho iziqithi ezingama-200, ke Zeziphi ezona zilungileyo zokuphila ngokubaleka ngobuhlobo? Singaqala nge ISkitahos, isiqithi esinehlabathi kunye ubomi obuninzi bobusuku kunye neembonakalo zomhlaba ezintle. Amen, eyokuqala Umnyhadala weNkcubeko ye-Gay kwiminyaka ethile eyadlulayo.
ISkitahos ifana nama-50 mabhankini ukuphonononga, kodwa ezona ndawo zidumileyo kubakhenkethi abathandana nesini esinye zezi Ibhanana enkulu kunye neBhanana encinci. Ukutshona kwelanga ngothando kukho Ulwandle lwaseAgia Eleni Kwaye kukho iilwandle ezintle zesanti entle ezo ILalaria kunye neKoukounaries. Ungasayinela ukuhamba ngesikhephe esijikeleza esi siqithi kwaye ke ufikelele kweyona miqolomba ifihliweyo kunye nemiqolomba yolwandle okanye ungene emanzini.
Ngaphandle kwamanxweme ulwakhiwo lweziqithi luhle, zininzi izakhiwo zekhulu le-XNUMX kunye nenqaba ephakathi. Idolophu endala yenye iperile, kunye nezitalato zayo ezenziwe ngamatye kunye neendawo zayo zokuhlala. Ewe, isiqithi se Mykonos nangoku kuluhlu. Esi siqithi sinobomi obukumgangatho wehlabathi kwaye ewe, ngu indawo edumileyo yesini iminyaka.
Bhiyozela owona mnyhadala uthandwayo kubantu bonke kwaye ukuba awufuni kuphoswa, zama ukuya kwiiveki ezimbini zokugqibela zika-Agasti xa Umnyhadala we-XLSIOR Mykonos weHlabathi weHlabathi. Iqela elicocekileyo! Ukuba ngumtshangatshangiso wakho ngumcimbi wosuku owufumana kuwo Ulwandle olukhulu lweParadesi apho kukho umculo rhoqo emva kwemini.
Olunye unxweme oludumileyo U-Elia, ungumhlobo ohamba ze kunye nekomkhulu lomnyhadala ebesitshilo ngaphambili. Ecaleni kwayo kukho Unxweme lweAgrari, enamatye amaninzi, kodwa ukuba ufuna isanti eninzi kunye nomda weepine eyona nto ilungileyo Ulwandle lwaseKalafatis.
Ngokucacileyo, kwindlela yakho awuyi kuphoswa ziindawo zokusila ezimhlophe ezithandwayo okanye iVenice encinci, izindlu zabalobi ezindala namhlanje eziye zaba ziivenkile kunye neevenkile. Indlela elungileyo yokujonga esi siqithi kukuqasha ibhayisekile kunye nohambo olungaphaya, ungatsiba uye eDelos nakwindawo yayo yezinto zakudala.
Santorini okwangoku kuluhlu lwethu lobufanasini eGrisi. Sisisiqithi esithandana kakhulu, kunye ne-caldera ebonakala ngathi iyadibana nesibhakabhaka ukutshona kwelanga. ISantorini ineebhari ezininzi kunye neelwandle kunye nobufanasini, ke yindawo eyahlukileyo kakhulu.
ISantorini inayo iilwandle zesanti emnyama, ngenxa yexesha elidlulileyo lentaba-mlilo, kodwa neminye imibala enje iilwandle ezibomvu nezimhlophe. Kamari, Agios, Red Beach, Perissa kunye Vlychada ulwandle gay. Ukuba uthanda umboniso bhanyabhanya ongaphandle ungaya kwimiboniso bhanyabhanya eKamari Cinema, enye yezona zibalaseleyo eYurophu. Yonke ihlanjwe ngewayini elungileyo yendawo.
IKrete Inayo yonke into, imbali, i-gastronomy, inkcubeko, ubomi bobusuku. Sesona siqithi sikhulu samaGrike kwaye ukusukela oko ngo-2015 uSuku lokuZikhukhumeza kwabhiyozelwa apha ivuleke ngakumbi kolu luntu. Lumka, oko akuthethi ukuba iCrete ifana neMykonos, isengumdabu kakhulu ke ukuqonda kufanelekile.
EKrete ukhenketho kufuneka lubandakanye isiqithi esihle sase Ispinalonga, ithanga langaphambili leqhenqa, kunye IKnossos ngenkulungwane ye-18 BC kwibhotwe. Kukho kwakhona idolophu yakudala yaseKrete, igcinwe kakuhle, kunye nezitalato zayo ezinamatye kunye neRenaissance kunye neVenetian yoyilo .. Ukuba uyathanda ukuhamba, eyona nto intle kukwenza indlela yeekhilomitha ezili-17 ISamariya canyon, Obo buhle!
Elunxwemeni lwesanti emhlophe nepinki, indawo ekuya kuyo Ulwandle lwase-Elafonisi, zamanzi azolileyo kunye namachibi endalo athe enziwa phakathi kwamatye. Kukho i- Ulwandle lwaseLaguna Balos, zeearna ezimhlophe kunye namanzi aluhlaza.
Zakynthos Iyathandwa Ukuqhekeka okuhombisa ulwandle lwayo. Unxweme lwayo lunamagingxigingxi kwaye lunee-koves ezininzi, kodwa ngaphakathi elizweni ineelali ezininzi ezintle kunye nohlaza oluninzi. Akukho ndawo zokufikela zodwa, imivalo yesini okanye iiklabhu apha, kodwa kancinci kancinci ziya zibakhona.
Umzekelo, ukuba kukho Ulwandle olunqunu lwesini: Vrontonero. Ayilolona lwandle luhle kwesi siqithi kodwa ukuba uyathanda ukuhamba ze… Okokugqibela, iZakynthos inemiqolomba emihle, iBlue Caves, amanzi aphantsi kwamanzi, amanzi ashushu eXygia kunye nengozi eyaziwayo, Ulwandle lwaseNavagio.
Corfu Ayisiyiyo indawo yesini gay eyaziwa ngokuba yiSantorini okanye iMykonos kodwa kunjalo Unommandla omncinci wesini kwaye iilwandle zayo zahlukile kakhulu: ukusuka kumanxweme anamatye ukuya kwiilwandle ezinkulu. Inkqubo ye- Ulwandle lwaseMyrtiotissa Ngenye ye Uninzi lwamabhishi ahamba phambili eGrisi kwaye nangona ingeyiyo isitabane kuphela zininzi izitabane ezikhoyo. Kukunxweme olusentshona lwesiqithi, uhambo olufutshane ukusuka kwikomkhulu lesiqithi.
Unxweme luqulathe umgca weewa ezimangalisayo kwaye ukufikelela kulo kunokuba nzima, kodwa kufanelekile! Olunye ulwandle eCorfu I-Issos, olona lwandle lude kwisiqithi kunye nearna emhlophe kakhulu. Inomtsalane nayo kwaye ke ibonelela ngemfihlo. Ukuphela komntla wolu lonxweme yindawo ekuthandana kuyo nesini.
Njengoko ubona, Zininzi iindawo zokufikela eGrisi ezinobuhlobo. Ngethemba ukuba ekuhambeni kwexesha kuyakubaninzi okanye okuninzi, ukuba le ilebhile ayisafuneki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Ubomi be-gay eGrisi: iGrisi kunye nokhenketho olunobungqingili
UAurelio Macola sitsho
Nabu ubomi bobufanasini eGrisi.
Phendula kuAurelio Macola
Iitshokholethi ezilungileyo zaseSwitzerland